BGR - - Tele RELAY တစ်ခုသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤကြီးမားသောဂြိုဟ်သိမ်ဆက်ဆက်ကမ္ဘာမြေမဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်ဟုပြော ... သေး
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤကြီးမားသောဂြိုဟ်သိမ်ဆက်ဆက်သေး ... ကမ္ဘာမြေကိုဖျက်ဆီးတော်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြော - BGR
ကမ္ဘာမြေဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့ဂြိုဟ်သိမ်၏အတွေးကိုသင်ညအချိန်တွင်နိုးစောင့်ရှောက်လျှင်သိပ္ပံပညာရှင်များ 2006 QV89 အဖြစ်လူသိများအာကာသကျောက်တဲ့အလားအလာသက်ရောက်မှုယခုထွက်အုပ်ချုပ်သောကြောင့်, သငျသညျယနေ့အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူရှူနိုင်ပါတယ်။ 2006 ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောကျ, လအနည်းငယ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များကယင်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြီးတွင်မြင်နိုင်ခဲ့, ထိုသို့အချိန်တွင်ယင်း၏အလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
သိပ္ပံပညာရှင်များကျယ်ပြန့်ဂြိုဟ်သိမ် 30 2006 မီတာအကျယ်အဆုံးခြေရာခံဆုံးရှုံးသွားသောအခါ, ဘယ်သူမှတကယ်ကဘာသိသည်။ ဒီကမ္ဘာမြေအဘို့အဘယ်သို့စိုးရိမ်ရေမှတ်ဆိုလိုနိုင်ဘူး။ သူတို့ကအချိန်ကသိတယ်အဘယျသို့ မှစ. , သုတေသီများဒီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကမ္ဘာတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး, ဖြစ်ကောင်းပင် 2019 ထံမှ .
"ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်မှာအန္တရာယ်ရှိသောဂြိုဟ်သိမ်နှင့်သူသည်အဘယ်မှာထွက်ရှာတွေ့ သိ. အကြား, "နက္ခတ္တဗေဒအဘို့ဟာဝိုင်ယီ Institute ၏တက္ကသိုလ်သည်ဒါဝိဒ် Tholen ကပြောပါတယ် ကြေညာချက်ထဲမှာ ။ Tholen ကျောက်ကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်သုတေသနကိုဦးဆောင်နှင့်ဂြိုဟ်သိမ်များ၏ခန့်မှန်းတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီးအများအပြားအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါတို့ "စနေနေ့ညကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးပစ်မှတ် 89 အတွက် QV2006 များအတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းကြီးနှင့်လရောင်အချို့ပါးလွှာ cirrus တိမ်နှင့်စာရေးတံကြားမှကျနော်တို့သက်သေအထောက်အထားများအဘို့အအချက်အလက်များ၏သာလေးမိနစ်လိုအပ်ပါတယ် လက်ျာအရာဝတ္ထုကိုတွေ့ဖူး, "Tholen ကပြောပါတယ်။
အနည်းဆုံးတော့အဘို့အ ... သူ့ရဲ့အနေအထားနှင့်အဓိပ္ပါယ်အလားအလာ impactor အဖြစ်အုပ်ချုပ်ဖို့တိကျစွာအလုံအလောက်ပတ်လမ်းကိုခြေရာခံနိုင်: အခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုတစ်ဦးဂြိုဟ်သိမ်ဘာအရာဝတ္ထုဆုံးဖြတ်ရန်အဖွဲ့ကကူညီပေးခဲ့ကြခြင်းနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များခဲ့ကြသည် 100 နှစ်ပေါင်းလာမယ့်။